China Botulinum Toxin mveliso kunye nabenzi | IiBululines
Yintoni i Ityhefu yeBotulinum?
Ityhefu yeBotulinum, yiprotein ye-neurotoxic eveliswe yintsholongwane iClostridium botulinum. Iyanciphisa ukubola kwemisipha ngokuthintela ukukhutshwa kwe-acetylcholine kwindibaniselwano ye-neuromuscular, ukufezekisa injongo yobuhle kunye nokubumba komzimba.
Yini i Ityhefu yeBotulinum Ingayenza?
Ityhefu yeBotulinum isetyenziswa kwiindawo ezininzi zonyango, ezinjengokususa imibimbi ebusweni, ukumila kobuso ebusweni, ukubumba imilenze kunye negxalaba nentamo, iintsini ezibonakalisiweyo, njl.
Ityhefu yeBotulinum ithunyelwa ngomkhenkce, kwiqhwa elomileyo. Ngaphambi nasemva kokumiswa kwakhona kufuneka igcinwe kwifriji kubushushu obu-2 ukuya ku-8 ° C (35.6 ukuya ku-46.4 ° F). Phambi kokuphinda umiswe kwakhona unokugcinwa iinyanga ezingama-24. Ngelixa umvelisi ecebisa ukusebenzisa ityhefu yeBotulinum kwisithuba seeyure ezingama-24 zokuphinda umiswe kwakhona, iAmerican Society for Plastic Surgery Botulinum toxin Consensus Panel icebisa ukusebenzisa ityhefu yeBotulinum kwisithuba seeveki ezi-6 kwaye ithi akukho lahleko yamandla ngelo xesha.
Umzi-mveliso wethu uneminyaka engama-20 ikhankanya ukuveliswa kwendawo ye-aesthetics yezonyango, kwaye sinamava ngaphezulu kweminyaka eli-9 ekuthumeleni kwelinye ilizwe, thina alwasys senza konke okusemandleni ethu ukunceda abathengi bagqibe kugqitywe i-Customs.
Izixhobo imveliso 3.Top
Sangena kuvavanyo lwezonyango ukusukela ngo-2006, kwaye sisebenzisana namaziko ezonyango afana neZhejiang Hospital, iShao Yifu Hospital, iSibhedlele seThoba sabantu eShanghai, iZhejiang Academy yeSayensi yezoNyango, njl. Iziphumo zibonisa ukuba iimveliso zotyando lweplastiki ziyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zeklinikhi, Umgangatho weemveliso ezilungiselelwe uzinzile, isiphumo sokugcwalisa silungile, ixesha lokulondolozwa lide, kwaye inqanaba lokuphendula okungalunganga liphantsi.
Q: Ngaba ndingaxuba iimodeli ezahlukeneyo?
Q: Ngaba ndibeka eyam logo (OEM)?
Q: Xa uyithumela iodolo yam?
A: Ngokwesiqhelo kwiintsuku ezimbini emva kokufumana intlawulo yakho, kodwa kunokuxoxiswana ngokusekwe kubungakanani beodolo.
Q: Ungaqinisekisa njani umgangatho?
A: Iminyaka engama-20 ikhankanya ukuveliswa kwendawo yonyango lwezonyango, umzi-mveliso unenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kwinkqubo yethu yemveliso.Ukuthengwa kwemveliso eluhlaza kunye nolawulo lomgangatho kulandelwa ngokungqongqo i-ISO9001: Inkqubo yolawulo ngo-2008. izixhobo zokuchonga kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho we-GMP ukubonelela ngesiqinisekiso esomeleleyo semveliso ekumgangatho ophezulu.
Potency nganye ngebhotile
Iiyunithi ezingama-50 zeClostridium botulinum toxin yohlobo oluntsonkothileyo
Iiyunithi ezili-100 zeClostridium botulinum toxin yohlobo oluntsonkothileyo
Iiyunithi ezili-150 zeClostridium botulinum toxin yohlobo oluntsonkothileyo
I-0.25mg ye-albhamu ye-serum yabantu
I-0.5mg ye-albhamu ye-serum yabantu
I-0.75mg ye-albhamu ye-serum yabantu
0.45mg ye-sodium chloride
0.9mg ye-sodium chloride
1.35mg ye-sodium chloride
I-Dilution eyongeziweyo (i-0.9% ye-sodium chloride) Iziphumo zeDosi eziSiphumo (iiyunithi / i-0.1mL) I-Dilution eyongeziweyo (i-0.9% ye-sodium chloride) Iziphumo zeDosi eziSiphumo (iiyunithi / i-0.1mL) I-Dilution eyongeziweyo (i-0.9% ye-sodium chloride) Iziphumo zeDosi eziSiphumo (iiyunithi / i-0.1mL)
Egqithileyo Ityhefu yeBotulinum
Okulandelayo: I-BEULINES Umnqamlezo oqhagamshelekileyo iiGels zokuGcwalisa ngeDermal
Uhlobo lweBotox Botulinum Toxin
Uhlobo lweBotulinum Neurotoxin A
Ityhefu yeBotulinum neBotox